ခြင်္သေ့ပြာတို့ တူရင်မြေမှာ နိုင်ပွဲမရသေးတဲ့ မှတ်တမ်းဆိုး ဆက်ထိန်းသွားခဲ့ရတဲ့ ယူဗင်တပ် ၁ – ၀ ချဲလ်ဆီး ပွဲမှ ပြောစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချက် ၅ ချက် - Sports myanamr
Myanmar no 1 football news website
ခြင်္သေ့ပြာတို့ တူရင်မြေမှာ နိုင်ပွဲမရသေးတဲ့ မှတ်တမ်းဆိုး ဆက်ထိန်းသွားခဲ့ရတဲ့ ယူဗင်တပ် ၁ – ၀ ချဲလ်ဆီး ပွဲမှ ပြောစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချက် ၅ ချက်
September 30, 2021 - by Editor
မနေ့ည က ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု ပွဲစဉ် ၂ ရဲ့ ယူဗင်တပ် – ချဲလ်ဆီး ပွဲမှာ ဧည့်သည် ချဲလ်ဆီး အသင်း ဟာ ယူဗင်တပ် အသင်း ကို ဒုတိယပိုင်း အစ ၁၁စက္ကန့်မှာ ပေးခဲ့ရတဲ့ အီတလီ လက်ရွေးစင် တောင်ပံ ကစားသမား ဖက်ဒရီကို ခီယေဆာရဲ့ တလုံးတည်းသော သွင်းဂိုးနဲ့ အတူ အရေးနိမ့်ခဲ့ရကာ ၊ တူရင်မြေမှာ နိုင်ပွဲ မရသေးတဲ့ မှတ်တမ်းဆိုးကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းသွားခဲ့ရပါတယ် ။ ထိုပွဲမှ ပြောစရာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချက် ၅ချက်ကို အခုလိုပဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ် ။
၁ ။ ချဲလ်ဆီး အတွက် ပွဲ ၁၅၀ ပြည့်မြောက်ခဲ့တဲ့ ဂျော်ဂျင်ဟို
၂၀၁၈ ခုနှစ် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ ဈေးကွက် အတွင်း နာပိုလီ ကနေ ချဲလ်ဆီးသို့ ပေါင် ၅၇သန်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့ အီတလီ လက်ရွေးစင် ကွင်းလယ်လူ ဂျော်ဂျင်ဟို ဟာ မနေ့ည က ယူဗင်တပ်နဲ့ ပွဲမှာ ယင်း လန်ဒန် အခြေစိုက် ကလပ် အတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ ပွဲပေါင်း ၁၅၀ ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
သို့ပေမယ့် ၎င်းရဲ့ ပွဲ ၁၅၀ ပြည့်မြောက်တဲ့ နေ့ဟာ အမှတ်တရ ဖြစ်စရာ နေ့တနေ့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ။ ယူဗီကို အရေးနိမ့်ခဲ့ရာမှာ ဂျော်ဂျင်ဟိုရဲ့ ပျမ်းမျှ စွမ်းဆောင်ရည် က သာမန်သာသာပဲ ရှိခဲ့ပြီး ၊ ဒုတိယပိုင်း တဝက်လောက်မှာ နည်းပြ ဖြစ်သူ သောမတ်စ် တူချယ် က ၎င်းကို ကွင်းလယ်လူ ရူဘင် လော့ဖ်တပ်စ်ချိခ်နဲ့ လူစားလဲခဲ့ပါတယ် ။
၂ ။ ကန်တေ မရှိတဲ့ ချဲလ်ဆီးရဲ့ ကွင်းလယ်အား
ကိုဗစ် ပေါ့စတစ် ဖြစ်ထားတာကြောင့် မနေ့ည က ပွဲအပြင် လာမယ့် ဆောက်သမ်တန်နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အိမ်ကွင်း ပွဲကိုပါ လွဲချော်မယ့် အန်ဂိုလို ကန်တေကြောင့် ချဲလ်ဆီးရဲ့ ကွင်းလယ် လုပ်အား ဟာ အတော်လေး လုပ်အားနှုန်း နိမ့်ကျနေတယ် ဆိုတာ မနေ့ည က ပွဲက သက်သေဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
ဘောလုံး အပေးအယူနဲ့ ကစားအား ကို လိုသလို အတင်အချ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ကန်တေ မပါတဲ့ ချဲလ်ဆီး ကွင်းလယ်မှာ ပွဲအလွန်ပန်းနေတဲ့ ကိုဗာဆစ် – ဂျော်ဂျင်ဟို အတွဲနဲ့ ရှေ့ဆက် စခန်းဆက်ဖို့ ရုန်းကန်ရဖို့ ရှိနေပါတယ် ။ ဒီ ပြဿနာကို သောမတ်စ် တူချယ် တယောက် ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
၃ ။ ယူဗင်တပ် အဖို့ ရော်နယ်ဒို နေရာ အစားထိုးမယ့်သူ တွေ့ပြီလား ?
ပြီးခဲ့တဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အီတလီ လက်ရွေးစင် အသင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး တိုက်စစ် ကစားသမား တဦးလို့ ဆိုရမယ့် ယူဗင်တပ် တောင်ပံ ကစားသမား ဖက်ဒရီကို ခီယေဆာ ဟာ မနေ့ည က ပွဲမှာ ဒဏ်ရာ ရနေတဲ့ ပေါ်လို ဒီဘားလား ၊ အယ်လ်ဗာရို မိုရာတာ တို့လို အဓိက တိုက်စစ် ကစားသမားတွေ မပါဝင်နိုင်ချိန် ၊ ယူဗီ တိုက်စစ်ကို အကောင်းဆုံး ဦးဆောင်ပေးသွားခဲ့ပါတယ် ။
တန်ပြန် တိုက်စစ် တွေက ၎င်းရဲ့ လုပ်အားနှုန်း ၊ အပြေးအားနဲ့ ဇွဲလုံ့လရှိမှုတွေကြောင့် ချဲလ်ဆီး ခံစစ် အမှားကို လိုတာထက် ပိုပြီး အခွင့်ကောင်း ယူနိုင်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ထိုပွဲရဲ့ တလုံးတည်းသော အနိုင်ဂိုးကိုလည်း ဘာနာဒက်ချီနဲ့ အတွဲအဖက် မိမိ ချိတ်ဆက်ရင်း ၊ ရူဒီဂါ တားဆီးနေတဲ့ ကြားကနေ လှလှပပ အဆုံးသတ် သွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ် ။
၄ ။ မေဆင်မောင့် ကို အသည်းအသန် လိုအပ်နေတဲ့ ချဲလ်ဆီး
ပြီးခဲ့တဲ့ မန်စီးတီးနဲ့ ပွဲမှာ ဒီရာသီ ပထမဆုံး ရှုံးပွဲ စတင် ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးနောက် ၊ ချဲလ်ဆီး မှာ မေဆင်မောင့် ဟာ အမှန်တကယ် မရှိမဖြစ် ပွဲထွက် ကစားသမား ဖြစ်လာမှန်း ပိုပြီး ပေါ်လွင်စေခဲ့ပါတယ် ။ ကန်တေလိုပဲ မောင့် ဟာလည်း ပြိုင်ဖက် ခံစစ်ဇုန် အထိ မမောမပန်း လုပ်အားအပြည့်နဲ့ press နိုင်တဲ့ ကစားသမား တဦး ဖြစ်ပါတယ် ။
မန်စီးတီးနဲ့ ပွဲမှာရော ၊ မနေ့ညက ပွဲမှာပါ ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ် က ဘောလုံး ဆုံးရှုံးသွားတိုင်း ၊ မောင့် လို အတင်းဝင် အတင်းလု အတင်း ဖိအားပေးမယ့် ကွင်းလယ် တိုက်စစ် ကစားသမားမျိုး ရှိမနေခဲ့ပါဘူး ။ မနေ့ည က ပွဲထွက်ခွင့် ကိုယ်စီ ပြန်ရခဲ့တဲ့ ဇီယက်ချ် နဲ့ ဟာဗက်ဇ် တို့ဟာ မောင့် ရဲ့ ဘောလုံးမဲ့ ကစားအား တဝက်ကိုပင် မမှီသေးပါဘူး ။
၅ ။ အီတလီမြေ ကျိန်စာ ဆက်သင့်နေတဲ့ ချဲလ်ဆီး
ချဲလ်ဆီး အသင်း ဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ ၊ လာဇီယို အသင်း ကို ရောမမြေမှာ ၀ – ၄ ရလဒ်နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် ၊ အခုအချိန် အထိ အီတလီမြေမှာ နိုင်ပွဲ ပြန်မရသေးပါဘူး ။ မနေ့ည က ပွဲဟာ ထိုမှတ်တမ်းဆိုး ကို ချေဖျက်ပြဖို့ အကောင်းဆုံး အခွင့်အရေးလို့တောင် ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
သို့ပေမယ့် တိုက်စစ်မှာ လူစုံတက်စုံ မရှိတဲ့ အပြင် ၊ ဒီရာသီ စီးရီးအေမှာ ရလဒ်နဲ့ ခြေစွမ်းပိုင်း အလှုပ်အခတ် များနေတဲ့ ယူဗင်တပ် ကို ချဲလ်ဆီးတို့ ဘောလုံး ပိုင်ဆိုင်မှု အပြတ်အသတ် အသာစီး ရခဲ့တာကလွဲရင် ၊ အပိုင် အခွင့်အရေး ဖန်တီးမှု ၊ တိကျတဲ့ ပေးပို့မှု ၊ အဆုံးသတ် သေချာမှု အပိုင်းတွေမှာ အတော်လေး အားနည်းခဲ့ပါတယ် ။
နောက်ဆုံး အချက် တရပ် အဖြစ် ဒီရာသီ အိမ်ကွင်း အဝေးကွင်း ရှုံးပွဲ တွေ့သွားတဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်းသားတွေရဲ့ မျက်လုံးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု တစိတ်တပိုင်း ကျနေတဲ့ အရိပ်အယောင် နည်းနည်းပါးပါး စတင် မြင်တွေ့လာရပြီး ၊ ဒါကို တူချယ် အနေနဲ့ လာမယ့် ဆောက်သမ်တန်နဲ့ ပွဲမှာ အမြန်ဆုံး ပြုပြင်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဗီလာရီးယဲနဲ့ နိုင်ပွဲအပြီး အသင်းသားတစ်ဦးကို ကယ်တင််ရှင်လို့ ခေါင်းစဥ်တပ်ရင်း ကျေးဇူးတင်လိုက်တဲ့ ဆိုးလ်ရှား
အာဆင်းကို စိတ်ပျက်ခဲ့ရပြီး အာဆင်နယ် အသင်း ကနေ ထွက်ခွာဖို့ ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ပွဲတစ်ပွဲ အကြောင်းပြောကြားလိုက်တဲ့ ဂန်းနားဂန္တဝင် ရောဘတ်ပီရက်စ်
ဘစ်ဆာကာ ကို ၂ ပွဲလက်လွှတ်ရမယ့် ယူနိုက်တက် ၊ နှစ်ကုန်ထိ နားရတော့မယ့် ရှာကာ ၊ ရွှေဘောလုံးအတွက် ကောလဟာလ တို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
Previous Article အာဆင်းကို စိတ်ပျက်ခဲ့ရပြီး အာဆင်နယ် အသင်း ကနေ ထွက်ခွာဖို့ ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ပွဲတစ်ပွဲ အကြောင်းပြောကြားလိုက်တဲ့ ဂန်းနားဂန္တဝင် ရောဘတ်ပီရက်စ်
Next Article ဗီလာရီးယဲနဲ့ နိုင်ပွဲအပြီး အသင်းသားတစ်ဦးကို ကယ်တင််ရှင်လို့ ခေါင်းစဥ်တပ်ရင်း ကျေးဇူးတင်လိုက်တဲ့ ဆိုးလ်ရှား
Copyright © 2022 Sports myanamr.